Khangela izinto ezihlelwayo zeKarma
Umqu. I-7 No. 5 Intshayelelo.
Umqu. I-7 No. 6 II.
Umqu. I-8 No. 1 III. Psychic Karma.
Umqu. I-8 No. 2 IV. Psychic Karma.
Umqu. I-8 No. 3 V. Ingqondo yeKarma.
Umqu. I-8 No. 4 VI. Ingqondo yeKarma.
Umqu. I-8 No. 5 VII. Ingqondo yeKarma.
Umqu. I-8 No. 6 VII. NgeKarma yokomoya.
Umqu. I-9 No. 1 IVIII. NgeKarma yokomoya.
Kule karma yesintu umntu uneemvakalelo ezingacacanga okanye ezingokwemvelo kwaye ngenxa yokoyika ingqumbo kaThixo kwaye acele inceba.
Vol. 7 AUGUST, 1908. 5
IKARMA ligama elisetyenziswe amawaka amaHindu kangangeenkulungwane. IKarma ibandakanya izimvo ezivezwe ngabantu kunye noluntu kamva, kumagama afana nekismet, ikamva, ukumiselwa kwangaphambili, ukumiselwa kwangaphambili, ubungqina, ukungafezeki, ikamva, ithamsanqa, isohlwayo kunye nomvuzo. IKarma ibandakanya konke okubonakaliswa ngala magama, kodwa kuthetha okungaphezulu kunawo nawuphi na okanye onke. Igama elithi karma lasetyenziswa ngendlela enkulu kwaye ebanzi ngakumbi ngabathile apho yavela khona kuqala kunoko lolo luhlanga olo lwalusebenza kulo ngoku. Ngaphandle kokuqonda iintsingiselo zamacandelo ayo nokuba la macandelo adityaniswa kunye neenjongo zokudlulisela njani, igama elithi karma alinakuze lenziwe. Ukusetyenziswa apho ibekwe khona kule minyaka yokugqibela ayikuko ngqiqweni ngokugqibeleleyo, kodwa kunqunyelwe kwaye kuthintelwe ekuqondeni amagama anjengakukhankanywe ngasentla.
Kwiminyaka engaphezulu kwamakhulu amabini abafundi baseMpuma beqhelene neli gama, kodwa hayi kude kube lixesha lokufika kukaMadame Blavatsky nange-Theosophical Society, eyasekwayo, banelizwi kunye nemfundiso yekarma yaziwa kwaye yamkelwe ngabaninzi eNtshona. Igama elithi karma kunye nemfundiso elifundisa yona ngoku ifumaneka kwezona zinguqulelo zezi mini kwaye zibandakanyiwe kulwimi lwesiNgesi. Uluvo lwekarma luvakaliswa kwaye luziva kuncwadi lwangoku.
I-Theosophists ichaze ikarma njengesizathu kunye nesiphumo; umvuzo okanye isohlwayo njengeziphumo zeengcinga kunye nezenzo zomntu; umthetho wembuyekezo; umthetho wokulinganisa, wokulingana nowobulungisa; umthetho wokuziphatha kakuhle kwendlela yokuziphatha, kunye nentshukumo kunye nokuphendula. Konke oku kuyaziwa phantsi kwegama elinye lekarma. Intsingiselo efihlakeleyo yegama njengoko ibonisiwe bubume begama ngokwalo idluliselwa yenye yeenkcazo eziqhubekileyo, izilungiso kunye nokusetyenziswa okuthile kwengcinga kunye nomgaqo elakhelwe kuwo igama lekarma. Nje ukuba le mbono iqondwe, intsingiselo yegama iyabonakala kwaye ubuhle benxalenye yayo bubonwa ngokudityaniswa kwamalungu enza igama elithi karma.
IKarma idityaniswa neengcambu ezimbini zaseSanskrit, ka kunye no-ma, abadityaniswa ngoonobumba u-R. K, okanye ka, bakwiqela le-gutterals, eyokuqala kwicandelo lokuhlulwa kabini koonobumba bakaSanskrit. Kwindlela yokuvela koonobumba, ka ngowokuqala. Sisandi sokuqala esidlula umqala. Ngomnye weesimboli zeBrahmâ njengomdali, kwaye imelwe ngunkulunkulu u-Kama, ohambelana ne-Cupid yaseRoma, uthixo wothando, kunye ne-Greek Eros kwisicelo sabo esithandekayo. Phakathi kwemigaqo-nkqubo yi-, umgaqo umnqweno.
M, okanye ma, unobumba wokugqibela kwiqela leezilumko, ezi zinto ziyisihlanu kuludwe lwezihlandlo ezihlanu. M, okanye ma, isetyenziswa njengamanani kunye nomlinganiso wesihlanu, njengengcambu yemana kwaye iyadibanisa kwi-Greek nous. Luphawu lwenyoka, kwaye ngokomgaqo yimpawu zeman, the ingqondo.
R yeyakho iicerechals, ezikwiqela lesithathu kuluhlu lweSanskrit. I-R inesandi esiqhubekayo esiqengqelekayo, esenziwe ngokubeka ulwimi ngokuchasene nophahla lomlomo. R kuthetha nyathelo.
Igama elithi karma, ke, lithetha umnqweno kwaye engqondweni in nyathelo, okanye, isenzo kunye nokusebenzisana komnqweno kunye nengqondo. Ke kukho izinto ezintathu okanye imigaqo kwikarma: umnqweno, ingqondo kunye nesenzo. Ubizo olufanelekileyo ikarma. Igama ngamanye amaxesha libizwa ngokuba yikrm, okanye i-kurm. Nasiphi na isimelabizo sivakalisa ngokupheleleyo umbono we-karma, kuba ikarma sisenzo esidityanisiweyo (r) ka (kama), umnqweno, kunye (ma), ingqondo, ngelixa ikrm okanye i-kurm ivaliwe, okanye icinezelwe ikarma, kwaye ayimeli isenzo, umgaqo ophambili obandakanyekayo. Ukuba ikhonsoniyali ivaliwe ivaliwe kwaye ayinakuvakaliswa; i r isavakala isandi, kwaye ukuba ilandelwa yikhonco elivaliweyo ma, ethi ke ibe ngu-m, akukho sandi sivelisiweyo kwaye ke akukho luvo lwengcinga yekarma, kuba isenzo sivaliwe kwaye sicinezelwe. Ukuze ikarma ibe nentsingiselo yayo epheleleyo kufuneka ibe nesandi sasimahla.
IKarma ngumthetho wokusebenza kwaye isukela kwingqolowa yesanti ukuya kuwo wonke umhlaba obonisiweyo kwisithuba kunye nendawo ngokwayo. Lo mthetho ukho kuyo yonke indawo, kwaye naphina ngaphandle kwemida yengqondo yelifu kukho indawo yeengcinga ezinje ngengozi okanye ithuba. Umthetho ulawula indawo iphela kwaye ikarma ngumthetho wayo yonke imithetho ethobelayo. Akukho siphambukiso ngaphandle komthetho okhethekileyo wekarma.
Abanye abantu bakholelwa ukuba akukho mthetho wokusesikweni okugqibeleleyo, ngenxa yezehlo ezithile abazithiye “ingozi” kunye “nethuba.” La magama amkelwe kwaye asetyenziswa ngabo bangayiqondiyo imigaqo-siseko yobulungisa okanye ababoni ubunzima bokusebenza yomthetho ngokunxulumene naliphi na ityala elikhethekileyo. Amagama asetyenziswa ngokunxulumene nezibakala kunye neziganeko zobomi ezibonakala ziphikisana okanye zingadibananga nomthetho. Ingozi kunye nethuba zinokuvela njengeziganeko ezahlukileyo ezingakhange zibekho ngaphambili, kwaye ezinokuthi zenzekile njengoko zenzekile okanye ngayo nayiphi na enye indlela, okanye ekunokwenzeka ukuba azange kwenzeke konke konke, njengombethe uwela, okanye umbane uhlaba okanye ukubetha indlu. Kulowo uyiqondayo ikarma, ubukho bengozi kunye nethuba, ukuba lisetyenziswe ngendlela yokwaphula umthetho okanye njengento engenasizathu, ayinakwenzeka. Zonke iinyani ezingena ngaphakathi kumava ethu nezibonakala ngathi zihamba ngokuchasene nemithetho eyaziwayo okanye ngaphandle kwesizathu, zichazwa ngokomthetho-xa iintambo zokuxhuma zilandelelwa zibuyela kwizizathu zazo zangaphambili kunye nazo.
Ingozi sisiganeko esinye kwisangqa seziganeko. Ingozi ibonakala njengento eyahlukileyo enye engakwaziyo ukunxibelelana nezinye izehlo ezenza isangqa seziganeko. Unokwazi ukulandelela oonobangela bangaphambili kunye neziphumo ezilandela "ingozi," kodwa njengoko engaboni ukuba kwenzeka njani kwaye kutheni ezama ukuziphendulela ngokuthi ayibize ngengozi okanye athi ngengozi. Ngelixa, ukuqala kwimvelaphi yolwazi lwangaphambili, injongo yomntu inika umkhombandlela kwaye imenze acinge xa ​​ejongene nezinye iingcinga okanye iimeko zobomi, isenzo silandela ingcinga yakhe kwaye isenzo sivelisa iziphumo, kwaye iziphumo zigqibezela isangqa seziganeko eyakhiwe: ulwazi, intshukumisa, iingcinga kunye nezenzo. Ingozi licandelo elibonakalayo lesangqa esingabonakaliyo seziganeko ezihambelana nayo kwaye ezinomdla kwisiphumo okanye esenzekelayo sesangqa seziganeko, kuba isangqa ngasinye sezehlo asipheli ngokwaso, kodwa sisiqalo sesinye isangqa yeziganeko. Yiyo loo nto ubomi bebonke benziwa lucwecwe olude lokujikeleza lweziganeko ezingenakubalwa. Ingozi-okanye nantoni na eyenzekileyo, ephathelele kuloo nto-sisinye seziphumo zentshukumo kwaye siyibiza ngengozi kuba yenzekile ngokungalindelekanga okanye ngaphandle kwenjongo yangoku, nangenxa yokuba singaboni ezinye izibakala yandulela njengesizathu. Ithuba likhetho lokukhetha isenzo kwizinto ezahlukeneyo ezingena kwisenzo. Konke kungenxa yolwazi lomntu, intsusa, ingcinga, umnqweno kunye nesenzo-esiyikarma yakhe.
Umzekelo, amadoda amabini ahamba emaweni eweni. Ngokubeka unyawo lwalo kwilitye elingazinzanga, omnye wabo ulahlekelwa nguenyawo kwaye ulungisiwe kwindawo enomngxuma. Iqabane lakhe, esiya kusindisa, lifumana umzimba ongezantsi, omile, phakathi kwamatye abonisa umququ we-ore yegolide. Ukusweleka komntu kuhlupheka usapho lwakhe kwaye kubangela ukusilela kwabo banxulumana nabo kwishishini, kodwa ngokuwa abanye bafumana umgodi wegolide ongumthombo wobutyebi bakhe. Isigameko esinjalo kuthiwa senzekile, sabangela usizi nentlupheko kusapho lwabangasekhoyo, ukusilela kwabo badibene naye kwezamashishini, kwazisa ithamsanqa kumlingane wakhe obufumene ubutyebi.
Ngokomthetho we-karma akukho ngozi okanye ithuba elinxulumene nesi sigameko. Umcimbi ngamnye uhambelana nokusebenza komthetho kwaye unxulumene nezizathu ezathi zenziwa ngaphaya kwemida yendawo yokuqonda. Ke ngoko, amadoda angabinakho ukulandela ezi zinto zibangela uzinzo kunye nokuthwala kwempembelelo yazo kwisehlo nakwikamva, abize iziphumo ngengozi nangethuba.
Nokuba intlupheko kufuneka ivuse ukuzithemba kwabo bebexhomekeke kulowo ungasekhoyo kwaye ikhuphe amandla kunye nemigaqo engabonakaliyo ngelixa bexhomekeke kwenye; okanye, ukuba, kwelinye icala, abo baxhomekekileyo kufuneka bancame kwaye badimazeke, banikezele ekuphelelweni lithemba kwaye babe ngabasebenzi, kuya kuxhomekeka ngokupheleleyo kubangaphambili kwabo babandakanyekayo; okanye ukuba litye ithuba lobutyebi lathatyathwa ngulowo wafumana igolide kwaye uliphucula ithuba lobutyebi ukuze enze ngcono iimeko zakhe kunye nabanye, ukuncedisa ukubandezeleka, ukunika amandla izibhedlele, okanye ukuqala nokuxhasa umsebenzi wokufundisa kunye nesayensi. uphando malunga nokulunga kwabantu; okanye, ukuba, kwelinye icala, akenzi nanye kwezi, kodwa usebenzisa ubutyebi bakhe, kunye namandla nefuthe elimnikayo, ngenxa yokucinezelwa kwabanye; okanye nokuba angade abe ngumbhexeshi, ekhuthaza abanye kubomi bokungaziphathi kakuhle, esiza nehlazo, usizi kunye nokonakala kuye nakwabanye, konke oku kuya kuba ngumthetho weKarma, oya kuthi umiselwe ngabo bonke abo babandakanyekayo.
Abo bathetha ngamathuba nangengozi, kwaye kwangaxeshanye bathethe kwaye bayamkele into enje ngomthetho, banqumle ngokwengqondo kwihlabathi elingaqondakali lolwazi kwaye banqande iinkqubo zabo zengqondo kwizinto ezinxulumene nelizwe elonwabisayo lomzimba ombi umba. Ukubona kodwa izinto zendalo kunye nezenzo zamadoda, azikwazi ukulandela oko kunxibelelanisa nokubangela imeko yendalo kunye nezenzo zamadoda, kuba oko kunxibelelanisa oonobangela kunye neziphumo ezinobangela akunakubonwa. Unxibelelwano lwenziwe kunye nakumhlaba ongabonakaliyo, kwaye ke uyaliwa, ngabo baqiqa ngokusuka kwiinyani ezibonakalayo zodwa. Nangona kunjalo, ezi zinto zomhlaba zikhona. Isenzo sendoda esizisa isiphumo esibi okanye esibonakalayo sinokuqwalaselwa, kwaye ezinye iziphumo ezilandela emva koko zinokulandelwa, ngumbukeli kunye nokuqiqa kunye nezibakala zehlabathi; kodwa ngenxa yokuba engaboni unxibelelwano lwelo nyathelo kunye nentshukumo yalo yangaphambili, ingcinga kunye nentshukumo kwixesha elidlulileyo (nangona ukude), uzama ukuphendula ngesenzo okanye isiganeko ngokuthi oko kube yimpembelelo okanye ingozi. Akukho nanye kula magama echaza isigameko; Ngala magama awunakucacisa okanye ukucacisa, ngokwale mithetho okanye imithetho evuma ukuba iyasebenza kwihlabathi.
Kwimeko yabahambi bobabini, ukuba umfi usebenzise ukhathalelo ekukhetheni umendo wakhe ngewayengakhange awe, nangona ukubhubha kwakhe, njengoko kufunwa ngumthetho wekarma, bekuya kubekwa elinye ixesha. Ukuba iqabane lakhe alikhange lihambe ngendlela enobungozi, ngethemba lokufumana uncedo ngebengekafumani ndlela yokufumana ubutyebi. Nangona kunjalo, ubutyebi babusele bube bobakhe, njengemisebenzi yemisebenzi yakhe yangaphambili, nokuba uloyiko beluya kumenza angavumi ukuhla azokuncedisa umlingane wakhe, ngewayeyisile intlebendwane yakhe. Ngokungavumeli kudluliswe ithuba, elivezwa nguwuphi, wakhawulezisa ikarma yakhe elungileyo.
IKarma ngowona mthetho mhle, umhle kwaye ulungelelene kuwo wonke umhlaba. Kuyamangalisa xa kucamngciwe, kwaye okungaziwayo kunye nokungafakwanga ingxelo ngeziganeko kuyabonakala kwaye kucaciswa ngokuqhubeka kwesizathu, ukucinga, isenzo, kunye neziphumo, konke ngokomthetho. Kuyinto entle kuba unxibelelwano phakathi kwesizathu kunye nengcinga, ingcinga kunye nentshukumo, isenzo kunye neziphumo, zichanekile ngokulinganayo. Kuyenzeka ngoba onke amalungu kunye nezinto ezisebenzayo ngaphandle komthetho, nangona ezibonakala rhoqo zichasene xa zibonwa zodwa, zenziwe ukuba zizalisekise umthetho ngokulungelelanisa kunye nasekusekweni kobudlelwane obufanelekileyo kunye neziphumo. ezininzi, ezikufutshane nezikude, ezichaseneyo nezinobungozi kunye nezinto.
I-Karma ilungisa isenzo sokuxhomekeka kwezigidi ngezigidi zamadoda asweleke kwaye aphile kwaye azakufa aphile kwakhona. Nangona sixhomekeke kwaye sixhomekeke kwabanye kuhlobo lwayo, umntu ngamnye 'uyinkosi yekarma.' Sonke siziinkosi zekarma kuba ngamnye ulawula ikamva lakhe.
Itotali yeengcinga kunye nezenzo zobomi ziqhutywa ngumbali wenene mna, ubuqu, kubomi obulandelayo, ukuya kwelandelayo, nokusuka kwinkqubo enye yehlabathi ukuya kwelinye, kude kube kwinqanaba lokugqibela lokugqibelela kufikelelwe kwaye Umthetho weengcinga zakho kunye nezenzo zakho, umthetho wekarma, unelisiwe kwaye wazalisekiswa.
Umsebenzi weKarma ufihliwe ezingqondweni zamadoda ngenxa yokuba iingcinga zawo zigxile kwizinto ezinxulumene nobuntu babo kunye neemvakalelo zawo zokuphatha. Ezi ngcinga zakha udonga apho umbono wengqondo awunakudlula ukulandela into edibanisa ingcinga, ngengqondo kunye nomnqweno ovela kuyo, kunye nokuqonda iintshukumo ezikumhlaba wenyama njengokuba bezalwa kwihlabathi lendawo ngokwasemphefumlweni. neminqweno yabantu. I-Karma ifihliwe kubuntu, kodwa yaziwa ngokucacileyo kubuntu obuhlukeneyo, ubuntu obu bukabani uthixo obuvela kuye ubuntu kwaye buyimbonakaliso kunye nesithunzi.
Iinkcukacha zomsebenzi weKarma ziya kuhlala zifihlakele lo gama umntu engavumi ukucinga nokwenza izinto ngokusesikweni. Xa umntu eza kucinga kwaye enze ngokufanelekileyo kwaye ngokungenaloyiko, ngaphandle kokudumisa okanye ukugxeka, uya kufunda ukuxabisa umgaqo kunye nokulandela ukusebenza komthetho wekarma. Uya kuthi ke omeleze, aqeqeshe kwaye alolonge ingqondo yakhe ukuze ibhoboze udonga lweengcinga ezijikeleze ubuntu bakhe kwaye akwazi ukulandelela isenzo seengcinga zakhe, ukusuka kwenyama ukuya kutsho kummangaliso nakwindlela yokomoya ukuya kwakhona kwizinto zokomoya kunye nokubuyela kwakhona eyomzimba; emva koko uya kungqina ikarma ukuba ibe yiyo yonke into efunwayo kuyo ngabo bayaziyo ukuba yintoni.
Ubukho bekarma yoluntu kwaye abantu abakhoyo bayazi, nangona bengayazi ngokupheleleyo, ingumthombo ophuma kuyo imvakalelo engacacanga, yemvakalelo okanye engokwemvelo yokuba ubulungisa bulawula umhlaba. Le nto inomdla kubo bonke abantu kwaye ngenxa yoko, umntu uyoyika "ingqumbo kaThixo" kwaye ucela "inceba."
Ingqumbo kaThixo kukuqokelelwa kwezenzo ezigwenxa zenziwe ngabom okanye ngokungazi nto leyo efana neNesesis, zisukele, zilungele ukugqitha; okanye ukuxhonywa njengenkemba yeDamocles, ilungele ukuwa; okanye njengelifu elitholelayo elenzelayo, bakulungele ukuzicombulula ngokukhawuleza nje ukuba iimeko zivuthwe kwaye iimeko ziya kuvumela. Le mvakalelo yekarma yoluntu yabiwe ngawo onke amalungu ayo, ilungu ngalinye elinayo nembono ethile ye-Nemesis kunye nefu leendudumo, kwaye le mvakalelo ibangela ukuba abantu bazame ukucacisa into ethile engabonakaliyo.
Inceba efunwayo emntwini kukuba iyakususa into yakhe kwiintlango okanye ihlehliselwe ixesha. Ukukhupha akunakwenzeka, kodwa ikarma yezenzo zomntu inokubanjwa ixesha, kude kube yilapho umxhasi enenceba ekwazi ukudibana nekarma yakhe. Inceba ibuzwa ngabo bazibona bebuthathaka kakhulu okanye boyise kakhulu uloyiko lokubuza ukuba umthetho uzalisekiswe kanye.
Ngaphandle kwemvakalelo yokuba "nengqumbo" okanye "impindezelo" kaThixo kunye nomnqweno "wenceba," kukho inkolelo yendalo okanye ukholo lomntu kwinto ethile apho kwihlabathi-ngaphandle kwako konke ukungalungisi okubonakala kuko konke kuthi- ubomi bemini-apho ngu, nangona ungabonakali kwaye ungaqondi, umthetho wobulungisa. Olu kholo lwendalo yobulungisa luzalwe ngokwasemoyeni womntu, kodwa lufuna ingxaki apho umntu aphoswa kuye ngokungabikho kokusesikweni kwabanye ukuze bakubize. Imvakalelo yendalo yobulungisa ibangelwa yinto efihlakeleyo yokungafi komphefumlo eqhubeka entliziyweni yomntu, ngaphandle kokungakholelwa kuye, ukuthanda izinto zehlabathi kunye neemeko ezichaseneyo athe wajongana nazo.
Ingcinga yokungafi komphefumlo sisiseko solwazi lokuba uyakwazi kwaye uzakuphila ngokubonakala kokungalunganga okubekiweyo kuye, kwaye uyakuphumelela ukulungisa izono azenzileyo. Ingqondo yobulungisa entliziyweni yomntu yinto enye emsindisayo ekubambaneni nenkoliseko yothixo onomsindo, kwaye eve ubunzima obude kunye nokufunyanwa komfundisi ongazi, unenkani, othanda amandla. Olu luvo lobulungisa lwenza umntu ongumntu kwaye lumenza ukuba angakwazi ukujonga ngokungenaloyiko ebusweni bomnye, nangona esazi ukuba kufuneka ahlupheke ngesiphoso sakhe. Ezi mvakalelo, zomsindo okanye zempindezelo kathixo, umnqweno wenceba, kunye nokholo kwinto engapheliyo yobulungisa bezinto, zibubungqina bobukho bekarma boluntu kunye nokuqatshelwa kobukho bayo, nangona kungaziwa ngamanye amaxesha ukungazi okanye kukude.
Njengoko umntu ucinga kwaye esenza kwaye ephila ngokweengcinga zakhe, ezilungisiwe okanye zongezwa ngokwemibandela ekhoyo, nanjengendoda, ngoko isizwe okanye inkqubela phambili epheleleyo iyakhula kwaye isebenze ngokweengcinga kunye nemibono yayo kunye nefuthe elikhoyo le-cyclic, Ngaba ziziphumo zeengcinga ezabanjwa kwakudala, kanjalo ke noluntu luphela kunye nehlabathi ekulo, kwaye lwakhona, luphila kwaye lukhula ukususela ebuntwaneni ukuya kwelona qondo liphezulu lengqondo nangokomoya, ngokwalo mthetho. Ke, njengendoda, okanye ugqatso, ubuntu bebonke, okanye endaweni yoko onke amalungu omntu angafikeleli kwimfezeko yokugqibela eyinjongo yokubonakaliswa kwehlabathi elithile ukufikelela kulo, kufa. Ubuntu nayo yonke into enxulumene nobuntu iyadlula kunye neendlela zehlabathi ezinobunewunewu ziyaphela ukubakho, kodwa ubume behlabathi buhlala, nobuntu njengobuntu buhleli, kwaye bonke badlulela kwimeko yokuphumla efana naleya umntu Udlula xa, emva kwemizamo yosuku, ubeka umzimba wakhe ukuze uphumle kwaye ungene kwakhona kuloo mmo okanye ilizwe elingaqondakaliyo abantu abathi balala ngalo. Ngomntu uyeza, emva kobuthongo, ukuvuka ambize kwimisebenzi yemini, ekunakekelweni nasekulungiseleleni umzimba wakhe ukuze enze imisebenzi yosuku, leyo isiphumo seengcinga zakhe kunye nezenzo zosuku langaphambili okanye iintsuku. Njengomntu, indalo yonke kunye nomhlaba wayo kwaye amadoda avuswa kwixesha lokulala okanye lokuphumla; kodwa, ngokungafaniyo nomntu ophila mihla le, ayinawo umzimba wenyama okanye imizimba ekuboneni ngawo izinto zangaphambili. Kufuneka ibize imihlaba kunye nemizimba.
Oko kudla ubomi emva kokuba umntu efile, yimisebenzi yakhe, njengombono weengcinga zakhe. Itotali iyonke yeengcinga kunye neenjongo zobuntu behlabathi yikarma ehlala ihlala, evusa kwaye ibize zonke izinto ezingabonakaliyo ukuba zisebenze ngokubonakalayo.
Ilizwe ngalinye okanye uthotho lwehlabathi lukhona, kwaye iifom kunye nemizimba ziphuhliswa ngokomthetho, umthetho lowo omiswa bubuntu obufanayo obabukhona emhlabeni okanye behlabathi ngaphambi kwembonakalo entsha. Nguwo lo umthetho wobulungisa banaphakade, obuthi bonke abantu, ngokunjalo iyunithi nganye, baxhamle iziqhamo zomsebenzi ophelileyo kwaye bahlupheke ziziphumo zesenzo esingalunganga, kanye njengoko kumiselwe ziingcinga nezenzo zangaphambili, ezenziwayo umthetho weemeko ezikhoyo. Icandelo ngalinye loluntu limisela ikarma yayo kwaye, njengeyunithi kunye nawo onke amanye amayunithi, enika kwaye enze umthetho olawulwa luluntu lonke.
Ekupheleni kwalo naliphi na elinye ixesha elikhulu lokubonakaliswa kwenkqubo yehlabathi, icandelo ngalinye lomntu liye laqhubela phambili ukuya kwinqanaba lokugqibelela eliyinjongo yokuvela, kodwa ezinye iiyunithi azifikanga kwinqanaba elipheleleyo, kwaye ke dlula kuloo meko yokuphumla ehambelana noko sikwaziyo njengobuthongo. Ekubuyeni kwakhona komhla omtsha wenkqubo yehlabathi nganye nganye iyunithi ivuswe ngexesha elifanelekileyo kunye nemeko yayo kwaye iqhubeke namava ayo kunye nomsebenzi apho wawushiye khona kusuku lwangaphambili okanye kwihlabathi.
Umahluko phakathi kokuvuswa komntu ngumntu imihla ngemihla, ubomi baye ebomini, okanye kwinkqubo yenkqubo yehlabathi, umahluko wexesha kuphela; kodwa akukho mahluko kumgaqo wokusebenza komthetho wekarma. Imizimba emitsha kunye nobuntu obutsha kufuneka yakhiwe ukusuka kwihlabathi ukuya kwihlabathi njengoko izambatho zibekwa ngumzimba imihla ngemihla. Umahluko ukwimo yemizimba neyeempahla, kodwa ubunye okanye mna ndihlala ndinjalo. Umthetho ufuna ukuba isinxibo esambethekileyo namhlanje sibe yinto ehleliweyo kwaye ilungiselelwe umhla ongaphambili. Lowo uwukhethileyo, osele ebhidekile kwaye walungisa imeko kunye nemeko nendawo afanele ukunxiba ngayo, ndim, umntu ozimeleyo, ongumenzi womthetho, apho anyanzeliswa sisenzo sakhe ukuba ayamkele loo nto ezilungiselele yena.
Ngokolwazi lweengcinga kunye nezenzo zobuntu, ezigcinwe kwimemori ye-ego, i-ego iyila icebo kwaye igqibe ngomthetho oya kuthi ubuntu bexesha elizayo kufuneka busebenze. Njengoko iingcinga zobomi bonke zigcinwe kwimemori ye-ego ngoko iingcinga kunye nezenzo zobuntu zizonke zigcinwe kwimemori yobuntu. Njengoko kukho i-ego yokwenyani eqhubekayo emva kokusweleka kobuntu kwaye ke kukho ne-ego yomntu eqhubeka emva kobomi okanye ixesha elinye lokubonakaliswa kobuntu. Le ego yobuntu yinto eyodwa enkulu. Iyunithi yayo nganye nganye iyimfuneko kuyo kwaye akukho namnye unokuyisusa okanye agqitywe kuyo ngenxa yokuba imo yobuntu yinto enye kwaye ayibonakali, akukho nxalenye yayo inokutshabalalisa okanye ilahleke. Kwimemori ye-ego yesintu, iingcinga kunye nezenzo zazo zonke iiyunithi ezizodwa zabantu zigcinwe, kwaye ngokwale nkumbulo ukuba icebo lenkqubo yehlabathi elitsha limisiwe. Le yikarma yobuntu obutsha.
Ukungazi kuya kwenzeka kulo lonke ilizwe de kufike ulwazi olupheleleyo nolugqibeleleyo. Isono kunye nesenzo sokungazi ngokwahluka ngokwamanqanaba. Njengokuba, umzekelo, umntu usona, okanye enze ngokungazi, ngokusela amanzi kwi-echibi elinesifo somkhuhlane, adlulise amanzi kumhlobo osela naye, kwaye bobabini banokufumana ubunzima bonke ubomi babo ngenxa yeso senzo sokungazi; okanye umntu unokwenza iyelenqe kwaye abambe ngabom imali enkulu kubatyali-mali abahlwempuzekileyo; okanye omnye unokwenza imfazwe, abulale, ayitshabalalise imizi, ayonakalise ilizwe lonke; Ukanti omnye unokuphembelela abantu ukuba bamkholelwe ukuba ungummeli kaThixo kunye nomntu ongowemvelo, apho ngokholo abanokuthi babenze bayeke ukucinga, bazinikele kakhulu kwaye balandele ezo zinto ziya kukhokelela ekonakaleni ngokokuziphatha nangokomoya. Isono, njengesenzo sokungazi, sisebenza kwimeko nganye, kodwa izohlwayo ziziphumo zesenzo ziyahluka ngokwamanqanaba okungazi. Umntu onolwazi ngemithetho yoluntu elawula uluntu kwaye esebenzisa ulwazi lwakhe ukwenzakalisa abanye, uya kubandezeleka ngakumbi kwaye ixesha elide kuba ukwazi kwakhe kumenza abenoxanduva, kwaye isono, isenzo esingalunganga, sikhulu njengokuba ukungazi kwakhe kunciphile.
Ke esona sono sinye, sisiphi na, ukuba ngubani na owaziyo okanye esifanele sazi, sokwenza omnye ngabom ilungelo lakhe lokuzikhethela, ukumenza buthathaka ngokumfihlela umthetho wobulungisa, ukumqhubela ekubeni anikezele ukuthanda kwakhe, mkhuthaze okanye umenze axhomekeke nokuba uxolelwe, amandla okomoya, okanye ukungafi komnye, endaweni yokuxhomekeka kumthetho wobulungisa kunye neziphumo zomsebenzi wakhe.
Isono nokuba sisenzo esingalunganga, okanye ukwala ukwenza oko kulungileyo; Zombini zilandelwa luloyiko lwemvelo lokusesikweni. Ibali lesono sokuqala asibobuxoki; Yintsomi efihlakeleyo, nangona kunjalo, iyinyani. Inxulumene nokwenziwa ngokutsha kunye nokuvela ngokutsha kobuntu bokuqala. Isono santlandlolo yayikukungavumi kolunye lothotho lweeNtombi zoMntu eziHlangeneyo, okanye uThixo, ukuphinda azalwe ngokutsha, ukuthatha umnqamlezo wakhe wenyama kunye nokuzala ngokusemthethweni ukuze ezinye izinhlanga zikwazi ukuzala ngokulandelelana kwazo. Ukwala kwabo kwakuchasene nomthetho, ikarma yabo yexesha langaphambili lokubonakaliswa ababenenxaxheba kuyo. Ukwala kwabo ukuphinda bazalwe xa litshilo ithuba labo, bavumela amaziko aqhubela phambili angaphantsi ukuba angene kwimizimba elungiselelwe bona nethi loo mibutho ingezantsi ayikwazanga ukusebenzisa kakuhle. Ngokungazi, amaziko asezantsi ahambelana neentlobo zezilwanyana. Oku, ukusetyenziswa gwenxa kwesenzo sokuzala, yayisisono santlandlolo, ngokwasemzimbeni. Isiphumo sezenzo ezingekho mthethweni zokuzala kwabantu ezingezantsi yayikukunika uluntu utyekelo lokufumana ngokungekho mthethweni-oluzisa isono, ukungazi, isenzo esingalunganga nokufa.
Xa iingqondo zibona ukuba imizimba yazo ithathiwe ziidyokhwe ezingezantsi, okanye amaziko angaphantsi komntu, kuba engakhange asebenzise imizimba, ayazi ukuba bonke bonile, enze ngokungalunganga; Ke lo gama izizwe ezingezantsi bezenze ngokungazi, iingqondo, zazala ukwenza uxanduva, ngenxa yoko isono sabo esikhulu kuba sisazi. Kungoko iingqondo zazingxama ukuya kufumana imizimba ababeyaliwe, kodwa bafumanisa ukuba sele ilawulwa kwaye ilawulwa yinkanuko engekho mthethweni. Isohlwayo sesono santlandlolo soonyana boMqondo oManyanisiweyo abangazukuphinda baphinde bazalwe ngokutsha, kukuba ngoku balawulwa yile nto bangavumiyo ukulawula. Xa benokulawula bengekhe, kwaye ngoku ukuba banokulawula abakwazi.
Ubungqina beso sono kwakudala bukhona kuwo wonke umntu osentlungwini nasentlungwini yengqondo elandela isenzo sobudenge abuqhunyiswayo, ngokuchasene nesizathu sakhe, sokuba enze.
IKarma ayisiwo umthetho ongaboniyo, nangona ikarma inokuthi idalwe ngokungaboni ngamehlo owenza ngokungazi. Nangona kunjalo, iziphumo zesenzo sakhe, okanye ikarma, ilawulwa ngobukrelekrele ngaphandle kokukhetha okanye ukukhetha. Ukusebenza kwekarma kwenziwa ngobugcisa. Nangona behlala bengayazi le nyaniso, umntu ngamnye kunye nazo zonke izidalwa kunye nobukrelekrele kwindalo yonke banomsebenzi wakhe ukuba bawenze, kwaye nganye iyinxalenye kumatshini omkhulu wokusebenza komthetho wekarma. Umntu ngamnye unendawo yakhe, nokuba kukwimo ye-cogwheel, iphini, okanye igeji. Oku kunjalo nokuba uyayazi okanye akazi nto. Nangona kunjalo engabalulekanga inxalenye enye inokubonakala ngathi iyadlala, nangona kunjalo, xa esenza isenzo uqala bonke oomatshini beKarma ekusebenzeni kubandakanya onke amanye amalungu.
Ngokuhambelana noku njengoko umntu esenza kakuhle kwinxalenye ekufuneka eyizalisile, ke uya kwazi ukusebenza komthetho; emva koko uthatha enye into ebaluleke ngakumbi. Xa engqineke elungile, ezikhulule kwimiphumo yeengcinga zakhe kunye nezenzo, kufanelekile ukuba aphathiswe ukuphatha ikarma yesizwe, ubuhlanga, okanye ilizwe.
Kukho iingqondi ezisebenza njengabameli jikelele bomthetho wekarma kwisenzo sayo kwihlabathi liphela. Ezi ziingqondi ziinkqubo ezahlukeneyo zonqulo ezibizwa ngokuba: lipika, kabiri, cosmocratores kunye neengelozi ezinkulu. Nokuba kukwisikhululo sabo esiphakamileyo, aba bakrelekrele bathobela umthetho ngokwenza. Ziyinxalenye kumatshini weKarma; bayinxalenye yolawulo lomthetho omkhulu we-karma, kanye njengengwe ebulala umntwana, okanye njengendoda enxilayo nenomdaka osebenzayo okanye obulale umntu ngenjongo yokubulala. Umahluko kukuba enye yenza ngokungazi, kanti enye yenza ngobunono kwaye kuba ilungile. Bonke banomdla ekuphunyezweni komthetho wekarma, kuba kukho ubunye kwindalo yonke kunye nekarma igcina ubunye ekusebenzeni kwayo ngokungagungqiyo.
Singabiza kwezi ngqondi zinkulu ngamagama ngendlela esifuna ngayo, kodwa basiphendula kuphela xa sisazi ukubabiza kwaye ke banokuphendula kuphela umnxeba esikwaziyo ukunika kwaye buhlobo bobunjani bomnxeba. . Abanakho ukubonisa ukungakhethi okanye ukungathandi, nokuba sinolwazi kunye nelungelo lokucela kubo. Baye baqwalasele kwaye babize amadoda xa amadoda enqwenela ukwenza ngokufanelekileyo, ngokungazingciyo kwaye kulunge kubo bonke. Xa amadoda enjalo elungile, iiarhente ezikrelekrele zekarma zinokufuna ukuba zisebenze kwindawo elungele zona iingcinga nomsebenzi wazo. Kodwa xa amadoda ebizwa njalo ngobukrelekrele obukhulu ayisiyiyo ingcinga yokuthandwa, okanye naluphi na umdla wobuqu kuwo, okanye ngombono womvuzo. Bayacelwa ukuba basebenze kwicandelo elikhulu nelicacileyo lesenzo kuba bafanelekile kwaye kuba kufanelekile ukuba babe ngabasebenzi bomthetho. Akukho luvo okanye iimvakalelo kulonyulo lwabo.
KwiKarma ye "Word" yeKarma kuya kujongwana nayo nokusetyenziswa kwayo kubomi bomzimba.Ed.